ขายอาคารพาณิชย์ 2ชั้น ที่ดิน 16ตรว.พื้นที่ใช้สอย 108ตรม.1ห้องนอน 2ห้องน้ำ ติดด้านหน้าโครงการ บ้า | DDHomeLand
โดย ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 พ.ค. 2552.
ขายอาคารพาณิชย์2ชั้น หน้ากว้าง 4ตารางเมตร ยาว15 ตารางเมตร ติดด้านหน้าโครงการ เนื้อที่16ตรว.พื้นที่ใช้สอย 108 ตารางเมตร 1 ห้องนอน2ห้องน้ำ ปูกระเบื้องเกรดA ขนาด 12x12 ทั้ง2ชั้น ชั้นบนกั้นห้องให้เรียบร้อย ด้านหลังต่อเติมกั้นเป็นห้องครัว+ซักล้าง ขนาด 12 ตารางเมตร ให้เรีบร้อยเหมาะสำหรับค้าขายและพักอาศัย ติดถนนใหญ่ ด้านหน้าโครงการ ราคา 850,000 บาท เหลือเพียง5ห้องเท่านั้น
คำค้น: แบบ อาคาร พาณิชย์2ชั้น ครึ่ง | อาคาร | แบบอาคารพาณิชย์ สองชั้น | ราคา ตึกแถว2ชั้น | မြန်‌မာ‌အေားကာ | တရုပ်​​အေားကား | မြန်​မာ​အောကား | မြန် မာ အောကား | မြန် မာ အောစာအုပ် | အောကား |
myanmar bottuck မြန်မာအိုး ပြွတ် အိုး ทวิตสาวแก่ ညမင်းသား หลักร้อยอัมพวา16/2/58 ညမင်းသား ညမင်းသား ညမင်းသား အပြာစာအုပ်များ မမ ဖူးစာအုပ် Seawseawstory.blogspot. ปริศนาถ้ำค้างคาวแดง 16/2/58 ဖာသည်မ လေးများ မမ ဖူးစာအုပ် Seawseawstory.blogspot. ปริศนาถ้ำค้างคาวแดง 16/2/58 ဖာသည်မ လေးများ xhxxfacebook အပြာစာအုပ် xhxxfacebook အပြာစာအုပ် ညီမ​လေး​အောစာ စောက်ဖုတ် အပြာစာအုပ်များ ဝတ်မှုံရွှေရည် ကာမ ညမင်းသား มุดใต้กระโปรงนักศึกษา มวยไทย7สี22/2/58 เลขเด็ดงวด 16/2/58 ခွေး လိုးကား အိုးလေးများx เยดแม่ยาย เลขล่างช.ช้างน้อย16/2/58 တရိဆန်​ เลขล่างช.ช้างน้อย16/2/58 ညီမ​လေး​အောစာ စောက်ဖုတ် အပြာစာအုပ်များ ဝတ်မှုံရွှေရည် ကာမ ညမင်းသား มุดใต้กระโปรงนักศึกษา มวยไทย7สี22/2/58